Ambongadiny alika mpiompy ambongadiny fikolokoloana fikotranana sy mpanamboatra vy | Icool
Dogs Pet Dogs Professional Tail Comb Grooming Comb Metal
Modely ： PC-3
Size: 180 * 25 * 20mm
Endri-javatra: Combs volo biby
Fitaovana ： Metal & Aluminium
Loko: mainty, volamena, mavokely, volomparasy, manga.
● 180mm ny halavan'ny alika ary 25mm ny sakany. Izy io dia manana fanjaitra 20mm tapered miaraka amin'ny savaivony 1.0mm. Izy io dia volon'osy fikolokoloana biby fiompy matihanina miaraka amina fantsona aliminioma habakabaka sy fanjaitra vy tsy misy fangarony.
● Ny sisin-rambony maranitra dia mety amin'ny famoronana taovolo lamaody mora foana. Ny tendron'ny sisiny dia ampiasaina hampisarahana ny volo ho sosona, ary azo ampiasaina hanakodia ny volo sy ny volombava, ary azo ampiasaina koa hamehezana ny randrana, ny tsipìka ary ny endrika mahafatifaty hafa, ahafahan'ny mpampiasa mahatsapa ny fitifirana hafa sy feno. .
● Maivana tokoa ny tahon'ny sisin-tsoratry ny aerospace aluminium. Aorian'ny fizotry ny fitrandrahana dia manome loko isan-karazany izy, miaraka amin'ny toetran'ny tsy mihena sy mahatohitra. Hita amin'ny loko mainty, volamena, mavokely, volomparasy, manga dimy.
● Ny fanjaitra vita amin'ny volo dia vita amin'ny vy tsy misy fangarony avo lenta, izay zahana amin'ny alàlan'ny dingan'ny famonoana hafanana avo lenta. Ny fanjaitra vy dia manana ny mampiavaka azy amin'ny hamafin'ny hafanana sy ny fahamendrehana tsara. Mora kokoa ny manadio volo biby, ary mora kokoa ny manosotra ny volo misy fatotra, izay manatsara ny fahombiazan'ny fiasa ho an'ny biby.
● Ny fanjaitra vy dia amboarin'ny milina fitotoana mandeha ho azy tanteraka, boribory ny loha ary tsy handratra ny hoditry ny hoditra rehefa mikasika ny hoditry ny biby. Boribory sy boribory ny rambon'ny sisiny, mba tsy handratra ny hoditry ny biby rehefa zaraina amin'ny biby fiompy.
Ny halavan'ny fanjaitra
Teo aloha: Mampiasà alika ho an'ny fanesorana tangles ny mpampakatra matihanina
Manaraka: Chunker Shears Dog Grooming Pet Thinning Gunting
Sisila fanamoriana vy
Volom-bolo fikolokoloana vy
Miambina alika metaly amin'ny alàlan'ny lava boribory sy ...
Mampiofana alika ho an'ny fanesorana ...